Dastabej » बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती
बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती – Dastabej
बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती
नेपालगन्ज । सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्न सहज गर्न र यातायाताका साधन सन्चालन गर्न जिर्ण पुलहरुको निमार्ण बर्खा अगावै गरिन्छ । तर, नेपालगन्जसंग जोड्ने पसरपुर गौघाट सडकको किरण नालामा पुल निमार्ण गर्ने नाममा काम ठिक उल्टो बर्खाको मुखमा पुल भत्काइएको छ । पुल निमार्ण जिम्मा पाएको गाल्भा सिद्धार्थ दर्शन जेभीले नयाँ पुल निमार्ण गर्ने भन्दै पूल भत्काएको हो । तर पुल भत्काएर पनि उक्त कम्पनीले काम नै सुरु गरेन । भएको पुल पनि भत्काउँदा उक्त सडक भएर यातायात सन्चालन बन्द भएको छ । सर्वसाधारणहरुले आउजाउ गर्न काठको काम चलाउ पुल बनाएका छन् । खोलामा आउने बाढीले काठको पुलबगाएपछि आउजाउ पूर्णरुपमा ठप्प भएको थियो । स्थानीयले फेरि पनि काठको मुडा र पट्रा राखेर पुल बनाएका छन् ।
खजुरा गाउँपालिका वडा न. २ का नेत्रजंग शाहले निमार्ण कम्पनीले बर्खामा पुल भत्काएर स्थानीयलाई सास्ती खेप्न बाध्य पारिएको बताए । उनका अनुसार निमार्ण कम्पनीले नयाँ पुल निमार्ण गर्ने भन्दै चैत्रमा पुल भत्काएका थिए । तर निमार्ण गर्ने समयावधि रहेको भन्दै निमार्ण कम्पनीले पुल निमार्णको काम नै सुरु गरेको छैन । पुलको काम सुरु नै नगर्ने भए बर्खामा किन भत्काएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । अर्को वर्ष पुल बनाउने भए किन बर्खामा भत्काईयो, स्थानीयको प्रश्न छ ।
उक्त पुल निमार्णका लागि उक्त जेभीले ५ करोड ८५ लाख ७५हजार ५ सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उसले २०७७।११। १९ गते सम्झौता गरी २०७९।३।२५ गते पुल निमार्णको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेक्काको अवधि बाँकी रहेको भन्दै निमार्ण कम्पनी पन्छिएको छ । तर स्थानीयले भने बर्खा सकिएपछि पुल भत्काएर निमार्ण गरिएको भए सास्ती खेप्न नपर्ने जनाए । पुल बनाउँला भनेर पुरानो भत्काईयो । तर काम नै सुरु गरिएन, स्थानीयको गुनासो छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमबहादुर एसीले उक्त पुल निमार्णको ठेक्का प्रदेश सरकारबाट गरिएको बताए । उनले पुल भत्काएर काम सुरु नगरेको आफूले देखे पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको जनाए । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र यो पुल होईन, उनले भने ।
१२ भाद्र २०७८, शनिबार १६:४० प्रकाशित